Gburugburu ụlọ akwụkwọ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
E wuru Oakleigh School na ngwụcha 1950s. Kemgbe ahụ, ọ na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe, na-agbasawanye ma na-emezigharị iji nye ya ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Anyị nwere ọdọ mmiri na-enye ụmụaka mmiri iji mụta igwu mmiri nakwa maka ụmụaka ndị chọrọ hydrotherapy.
Schoollọ akwụkwọ ahụ nwere ebe egwuregwu dị nro iji kwado Mmepe Ahụ, Nkwukọrịta, mmekọrịta mmekọrịta na iji nye ebe dị egwu egwu, yana ọnọdụ ịma aka na nchekwa maka ụmụaka nke afọ na ikike niile.
Anyị nwere ụlọ sensory na ọtụtụ ụda mara mma na atụmatụ ọkụ iji kwado mkpali na nyocha ọhụụ, yana ohere maka ịmekọrịta egwuregwu na mmekọrịta.
Anyị nwekwara ọtụtụ oghere, nke a na-ahazi iji soro isiokwu ụlọ akwụkwọ, iji kwalite ahụmịhe mmụta nke ụmụaka.
Anyị nwere ọtụtụ akụrụngwa akọrọ iji weta ihe mmụta n'ime usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ anyị. Ha na-eme ka nkuzi na mmụta bụrụ ihe na-akpali akpali, na-enye ụmụ anyị ohere inwe ọ excitedụ banyere inwe olu, na ịchịkwa gburugburu ha. Ndị a gụnyere teknụzụ na-ahụ anya, na-enyere nwata aka inweta kọmpụta; ihe eji eme ihe iji mee ka klas ọ bụla banye n'ime ụlọ sensory; na ihe ndozi nke ala nke na-eme ka ala ghọọ ebe a na-emekọrịta ihe.
A na-enweta ụlọ ọrụ klas nke ọma na akụrụngwa ọkachamara yana ọtụtụ ngwa nkuzi ndị ọzọ maka ụmụaka zuru oke n'ụlọ akwụkwọ. Roomslọ akwụkwọ nwere nnukwu ihuenyo plasma nwere mmekọrịta, ejikọrọ na kọmputa na ngwanrọ kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ Mmasị Mmụta Pụrụ Iche, yana iPads nwere ngwa ndị na-akpali akpali. N’ebe klas ndị dabara adaba nwere ihe enyemaka ndị ọzọ na-enye nkwukọrịta, ụfọdụ na-eji okwu ekwu yana ọtụtụ ngbanwe iji mee ka ụmụ akwụkwọ nwekwuo usoro ọmụmụ.
E kewara ebe egwuregwu ahụ n'ime EYFS, Oghere nke mbụ 1 na 2 egwuregwu egwuregwu na mpaghara nke nnukwu egwuregwu na egwuregwu obere egwuregwu, astroturf, ebe nchekwa na ụzọ maka trikes, n'èzí akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa egwu na swings wdg.